Madaxweynaha kenya oo diiday inuu saxiixo qorshe Barlamaanka kenya so dajiyeen – Radio Daljir
Seteembar 14, 2018 5:18 g 0
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa diiday in uu sixiixo qorshe ay soo jeediyeen baarlamaanka, kaas oo labo sano dib u dhigi lahaa in 16% canshuurta lagu kordhiyo shidaalka, arrintaas ayaana caro baaxad wayn dhalisay.
Madaxweynaha ayaa arrintan uga hadli doona khudbad uu jeedin doono galinka dambe ee maanta.
Baarlamaanka ayaa hadda dib u eegi doona soo jeedintoodii hore, sida ku cad qoraal uu ku sixiixan yahay gudoomiyaha baarlamaanka Kenya Justin Muturi oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters.
Canshuurta iibka ay ee shidaalka la dul dhigay ayaa la soo saaray bishan horraanteedii.
Waa qayb ka mid ah dadaalka ay dawladdu ku doonayso in ay sare ugu qaaddo dhaqaalaha ay ka hesho canshuuraha, si ay dhaqaalaha u kabto isla markaasna ay ugu suuragasho in ay dayn ka hesho hay’adda lacagta adduunka ee IMF.
Golaha Iskaashiga Dowlad Goboleedyada (GIDG) oo ku baaqay in dalka la badbaadiyo (war murtiyeed)